Orambe vao mainka manavesatra ny fiantraikan’ny volkano La Soufrière ao St. Vincent sy ao Grenadines · Global Voices teny Malagasy
'Manampy trotraka ny atrehanay ny fihotsahan'ny tany sy ny tondradrano'
Voadika ny 06 Mey 2021 13:16 GMT
Rihitra mikoriana avy ao amin'ny La Soufrière. Sary an'i Dave Brown ao amin'ny Flickr; CC BY-NC-ND 2.0.
Sahala amin'ny hoe tsy ampy ny fipoahana volkano efa misy amin'izao fotoana izao sy ny firarahan'ireo lavenona eraky ny faritra avy ao amin'i La Soufrière, fa dia miatrika tondradrano sy fihotsahan'ny tany mampididoza indray izao ireo vahoaka ao St. Vincent sy Grenadines, vokatry ny orambe nivatravatra tamin'ny 29 Aprily.
Arakaraky ny fanatonan'ny vanimpotoanan'ny rivomahery 2021 ao amin'ny Atlantika, mety vao mainka hiharatsy ny fihotsahana ateraky ny lahars—fotaka mandrevo avy amin'ny volkano. Ireo faika matevina sy poti-javatra vôlkanika taterin'ny lahars, izay afaka mikisaka malaky be mankeny amin'ireo lemaka iva fihandronan'ny rano, dia mety hanimba trano, handrakotra tany midadasika fanaovana fambolena ary hanentsina ireo renirano sy riandrano madinika, hiteraka tondradrano mahavoa faritra maro:
Sary: Richard Robertson, UWI-SRC@VincieRichie #lasoufriere #LaSoufriere #svg #uwi #stilldangerous #lasoufriereeruption2021 #TeamSRC #redalert #volcano #uwiseismic pic.twitter.com/5tuV0sd63W
Mamely ireo faritra manakaiky ny ilany atsimo amin'ny nosy ny fihotsahan'ny tany sy ny tondradrano, isan'izany i Kingstown, renivohitra. Ao amin'ny Facebook, Lennox Lampkin, izay mipetraka tena akaiky kely an'ilay volkano, no nanamarika hoe:
Ankoatra izay, tsikariny fa:
Ny National Emergency Management Organisation (NEMO)- sampan-draharaha misahana ny fitantanana ny hamehana – dia namoaka fanambaràna an-gazety tamin'ny 27 Aprily, nanamarihany fa misy lahars mampididoza voalazan'ny tatitra any amin'ireo faritra mena sy volomboasary, ary lasa manahirana ny fivezivezen'ny mponina, indrindra fa andrasana ny mety ho mbola fitohizan'ny orambe mandritra ny fiafaran'ny herinandro.
Marobe ireo olona mipetraka amin'ireny faritra ireny no nilaza fa “maratra anaty” ry zareo noho ny tsy fahafahan-dry zareo mody an-trano.
Niaraka niasa tamin'ny @uwiseismic ao Wallibou izahay tamin'ny Alatsinainy (havia), ary androany koa (havanana). Aza tsinontsinoavina velively ny herin'ny lahar #stilldangerous pic.twitter.com/ZzfiEz929L
Miaraka amin'ny orana, miampy ny loza mety hitranga. Misy tatitra milaza androany maraina fa nisy feo nivoaka avy tao amin'ny #LaSoufriere. Na nisy fipoahana mahery, na fitosahana fotsiny, ny fotoana no hilaza izany. pic.twitter.com/6CGKAn04oA
Ry zalahy, izahay aty #Vincy dia lelafin'ny #afo #lavenona, ary amin'izao fotoana izao #rano. #orana mampijaly anay. #svg #april2021floodsvg #StVincentAndTheGrenadines #LaSoufriere
Niteraka fisiana Lahars (fihetsehana malaky be, fangarom-bato mavesatra, lavenona&zavamaniry) ny orambe nandritry ny alina tao Saint Vincent & Grenadines , izay marihitra toy ny ranon-tsimenitra mbola mando no sady afaka hiteraka fahavoazana henjana be. Vao mainka hampitombo ny dona ara-tsaina mahazo ny mponina ao SVG io.#SVG #LaSoufriere #volcano #trauma https://t.co/zts0tmllK3
Mandalo sedra hoe hatraiza no mafy toto ny firenena, ary ny vokadratsy manao randran-tarika avy amin'ilay fipoahana volkano dia nisy fiantraikany ratsy tamin'ny fambolena sy ny biby fiompy, misy ny ahiahy momba ny tahirin-tsakafo ho an'i St. Vincent, hatramin'ny ho fahaveloman'ny fiainana anaty ala ao aminy, isan'ireny ireo boloky zanatany ao St. Vincent.
Kanefa, ny sampandraharaha misahana ny ala ao amin'ny firenena dia tsy tapaka mamatsy sakafo an'ireo sehatra isankarazany natao hamahanana voronkely any anatin'ny faritra volomboasary. Nampanao fanombanana teny an-kianja ihany koa ry zareo momba ireo toeram-ponenana fototra any an'ala, tsy hoe fotsiny ho an'ireo boloky zanatany ao St. Vincent, fa koa ho an'ireo karazana zavamaniry sy biby hafa tsy fahita afa-tsy ao an-toerana, ary nandrisika ny vahoaka mba handray anjara amin'io ezaka ataony io amin'ny fandefasana tatitra raha mahita vorona na biby toa mivalaketraka.
Na noheverina ho toy ny “farandro” aza ny fiantraikan'ny fipoahan'ny La Soufrière, nandefa sary iray i @uwiseismic tao amin'ny Twitter, izay nifantoka bebe kokoa tamin'ny fizakàn'ny firenena ny zavamisy:
Sarin'ny androany. Lemaka iray ao amin'ny sisin'i Leeward ao SVG nizaka ny fipoahan'ny La Soufriere amin'izao fotoana izao. Na eo aza ny faharavàna, mbola misy tsimoka maitso mijoro hatrany manoloana ny setrasetran'ilay volkano. Miaraka amin'ny fotoana, hiverina ho toy ny taloha ny faritra. Sary an'i @VincieRichie pic.twitter.com/B1cA5RaLpx
Ao anatin'izany koa, ireo kintan'ny fialamboly ao amin'ny faritra, toa an'i Rihanna, izay teratany avy any Barbados; Sean Paul sy Buju Banton, avy any Jamaika ary Nicki Minaj, izay manana razambe avy any Trinidad&Tobago, dia hanao fampisehoana kaonseritra virtoaly amin'ny 23 May ka tanjona amin'izany ny hanangonana ireo vola ilaina ho an'i St. Vincent & Grenadines. Ny Oniversite ao Antilles ihany koa dia nandrindra ezaka fanangonana vola tamin'ny fampiasana ny tenifototra #RallyRoundSVG.
Mandritra izany fotoana rehetra izany, mitohy mivoatra ihany i La Soufrière, ary tohizan'ireo mpahay siansa ny fandraketana ireo fiantraikan'ny fihetsehany—isan'izany ny fipoahana iray tamin'ny 22 Aprily, Andron'ny Tany
#LaSoufriere #mbolamanetrokamampididozafoana na dia 3 volana & 9 andro aty aorian'ny nihetsehany aza, 13 andro nipoahana ary 8 andro nilamina…niverina natory ve? @DormantGroup @uwiseismic @soufriere_hills #TeamSRC pic.twitter.com/wThqWobMYp
Tsy misy mahafantatra izay ho ataon'ny La Soufrière manaraka eo, na olona iray aza—eny fa na dia ireo mpahay momba ny volkano izay nandinika ny fivoarany hatrany alohan'ilay fipoahana tamin'ny 9 Aprily aza— saingy eken'ny rehetra fa #mbola mampididoza izy.